A na -emegharị VSCO kpamkpam na imewe | Androidsis
VSCO, otu ngwa kacha mma maka ịweghachi foto, na-emegharị atụmatụ ya
Eziokwu bụ na o zuru ezu siri ike ịhọrọ ngwa maka idegharị foto. Anaghị m ekwu nke a n'ihi na ha dị njọ, mana na ntụzịaka, ha nwere oke mma na ndị nrụpụta ha tụrụ aro na anyị ga -agabiga na itinye ọtụtụ ka oge na -aga, anyị achọpụta na anyị na -ahọrọ nke a karịa ọzọ. Ọ bụ ezie na enwere ngwa na -arụ nnukwu ọrụ n'akụkụ niile, site na ịnwe ntakịrị ihe na ntanetị, ahụghị ya na ngwa ndị ọzọ, ruo inye onye ọrụ ahụ mmezi zuru oke iji nweta foto ahụ zuru oke nke anyị ji otu n'ime ekwentị ndị ahụ were. na igwefoto pụrụ iche.
VSCO bụ nke m na -ehota na nke emelitere ka ọ dị taa ka ọ bụrụ ngwa fọrọ nke nta pụrụ iche na imewe. Ọ dịkwa na imewe ebe emegharịrị VSCO na ụdị ọhụrụ ahụ site na iji igodo ka mma site na ịnye UI dabere na mmegharị ahụ, oghere nkeonwe ka mma nke nwere ụda ndị ọzọ etinyere na anya yana ijide na ịchọ onyonyo nke ọ nwere. etinyere ntakịrị ịhụnanya ka o wee nye ndị ọrụ nsonaazụ kacha mma. VSCO egosikwala anyị ọzọ na enwere ngwa dị ka ya na imewe, ọ na -eme ka mmadụ nwee ike mara otu interface ahụ.
1 Nhazi ọhụrụ na VSCO
2 A pụrụ iche ọrụ interface na ahụmahụ
Nhazi ọhụrụ na VSCO
Ozi niile abịarutela ugbu a na VSCO bụ maka ebumnuche nke interface na melite ahụmịhe onye ọrụ. Ọ dị otu a na ihe emegoro, na iji igwefoto site na ekwentị ọhụrụ ndị ahụ were see ọmarịcha foto, mgbe anyị hụrụ ha na ngwa a, ha nwere ike ịpụta n'ụzọ ka mma n'ihi ntakịrị ihe na ọmarịcha interface. N'ebe a, anyị nwere ike ịsị na ọ ka mma ịnwale ya karịa ikwu maka ya.
Agbakwunyere igodo ọhụrụ na ngwa dabere na UI nke anyị jiri anyị na -akwagharị ekele maka mmegharị ahụ. N'ụzọ dị otú a, a na -emezu ya na anyị nwere ike isi n'otu saịtị gaa na saịtị ọzọ ngwa ngwa nakwa na anyị na -elekwasị anya n'ihe onyonyo. Mmegharị ahụ na -enye anyị ohere ịga ohere nkeonwe ma ọ bụ profaịlụ anyị iji kpọga anyị ozugbo na mmelite usoro iheomume nke ndị anyị na -eso.
Oghere ma ọ bụ profaịlụ nke onwe ahụ enwetakwala mmezi anya imesi ihe bụ ihe okike ike, edezi na ibipụta onyonyo. Vidiyo nke ụmụ nwoke sitere na VSCO bipụtara na -egosi nkọwa niile nke ihe ekwuru ugbu a gbasara imewe, yabụ ana m akwado ka ị gafee ya maka ilele.
A pụrụ iche ọrụ interface na ahụmahụ
Enwekwara ihe onyonyo na nchọta ka mma, abawanye arụmọrụ ngwa na ihe ijuanya dị na igwefoto n'ihu mgbe ị na -aga were selfie. Ọ bụrụ na agwara m ya, nke a agaghị abụ ihe ijuanya, yabụ a na m agba gị ume imelite ngwa ahụ, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịnwalebeghị ya, gaa n'ihu wụnye ya.
VSCO bụ ngwa anyị nwere ike ịsị na -akwanyere foto ị nwere ugwu site n'ịgbanwe ha ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche. Mgbe anyị gara tinye ihe nzacha na Ị na -edozigharị ụdị ọnụọgụ ya dị iche iche dị ka ụda akpụkpọ anụ, nchapụta, nkọ ma ọ bụ ihe ngosi n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ, mmadụ na -achọpụta ụdị ngwa ọ bụ. Ewezuga ikike nzacha ya, nke ị nwere ike ịzụta ngwugwu dị oke mma, o nwekwara nnukwu ndị ọrụ nke ị nwere ike iso na mee ka ha soro gị ka ị wee hụ foto kacha mma ewepụtara. Nke a bụ ihe ọzọ dị iche na ọrụ ndị ọzọ nke ọtụtụ mechara họrọ.
Ngwa bụ kpamkpam enwerela onwe ya na-enweghị mgbasa ozi yana na-eji ihe nzacha pụrụ iche dị elu iji chepụta nnukwu ọrụ nke ndị mmepe ya na-arụ. Ozi ọma maka mmelite a kemgbe anyị biputere ihe na Androidsis.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » VSCO, otu ngwa kacha mma maka ịweghachi foto, na-emegharị atụmatụ ya